Vidio 8 - Hormones-nwoke na nwanyị | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Vidio 8 - Hormones-nwoke na nwanyị
Hormones Cross-Sex, Dysphoria okike / Site mere
Site n'aka onye edemede bụ John Whitehall.
8 vidiyo: Dysphoria nke Nwata.
Yabụ ịkwesịrị ịghọta ihe gbasara GnRH tupu ị ghọta oke, esemokwu nke arụmụka a na ọ bụrụ na ị gbochie GnRH, ị ga-ekwe ka nwatakịrị ahụ nwee ike ịghọta ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị, n'ihi na ị gbochiela ụdị okike niile usoro nke ga-eweta nke ahụ. N'ọnọdụ a dịpụrụ adịpụ, nwatakịrị ahụ ga-anọ n'okpuru nkwado, enweghị nkwanye ugwu, nke ndị ikike ya niile na-asị, "you're bụ n'ezie nwatakịrị nwanyị ma ọ bụ nwa nwoke." Ọ bụ ya mere physiology ji dị njọ. Ha na-ekwu na enweghị ihe akaebe. Enwere otutu ihe akaebe banyere nke a, ma anyị ka kwuchara banyere akụkụ a banyere atụrụ.
Ugbu a, m ga-ekwu, achọrọ m ka ị chee na cell, naanị cell n'onwe ya, na sel, nke a bụ ihe ọhụrụ, homonụ bụ isi nke na-ahụ maka iguzosi ike n'ezi ihe, ahụike, ọrụ nke sel, bụ n'ezie estrogen. Ugbu a estrogen na-emepụta ihe na akwara ozi nakwa na àkwá. A na-emepụta testosterone na testes na nwoke nwoke testosterone na-arịgo arịa ọbara wee bata n'ime akwara ahụ, mana a na-emepụta ya na neuron ahụ, nke mere na enwere oke njikwa njikwa n'etiti homonụ mmekọahụ na cell akwara. Ọ bụrụ na ọ na-adabaghị adaba, ọ bụrụ na estrogen belatara, mgbe ahụ mkpụrụ ndụ, ahụ nke sel ahụ, (ebe a bụ ebe a) nke a bụ neuron ahụike, ị nwere ike ịhụ dendrites, dị ka akpọrọ ha, ngalaba na-apụta n'elu na alaka ị nwere ike ịhụ obere ibe n'ibe. Ndị ahụ bụ spines.
(Ọ bụrụ na anyị nwere ike igosi onye na-esote ya.) Ihe anyị na-ekwu bụ neuron.
Neurons siri ike na adighi ike.
Ga - ahụ neuron ma ị hụ cholesterol na ala. N’ezie, a na-ewere cholesterol n’ime akwara ozi, gbanwewa ya na testosterone, ọ ghọrọ estrogen. Nke ahụ metụtara ahụike nke sel. N'ihi na anyị maara na spines na-arapara n'ahụ bụ ebe mkpụrụ ndụ ndị ọzọ na-ekwurịta okwu. Chọrọ sel ndị ọzọ iji kwurịta okwu, iji chee echiche kwụ ọtọ. Ọ bụrụ na etrogen ebe a na-etinye aka na ya, na GnRH bụ maka enzyme nke na-agbanwe testosterone n'ime estrogen, ọ bụrụ na ihe na-agahie na nke ị na-enweghị oghere dendrite.
Yabụ kedu ihe anyị ji ekwu maka ihe a niile? Maka na anyị na-agagharị ugbu a, na-eleba anya na homonụ nwoke na nwanyị. Ọ bụrụ na ị na-eji, nke ahụ pụtara na ị na-asa onye a nnukwu doses ebe ha na-ekwesịghị ịbụ, nke testosterone ma ọ bụ estrogen, ọ dịghị onye maara ihe mmetụta ga-abụ, olee otu nke a ga-esi mebie nlezianya a na-achịkwa nke ọma. Ihe anyị maara bụ ma ọ bụrụ na ọ na-ewe iwe, mgbe ahụ, spines adịghị ebe ahụ. Ihe anyị maara, ya na homonụ nwoke na nwanyị, bụ na ọ bụrụ na enyere nwoke na estrogen, mgbe ahụ ụbụrụ, olu nke ụbụrụ, na-adalata na ọnụego okpukpu iri karịa ịka nka mgbe ọnwa anọ gachara. Anyị na-ekwukwa banyere ndị na-eto eto nọ n'afọ iri abụọ na iri atọ bụ ndị so n'ụdị usoro a, ọ bụghị ndị okenye ndị ụbụrụ ha na-agbada ngwa ngwa ma nye gị ọnụego nkịtị.
Yabụ, ihe anyị na-ekwu bụ na e guzobewo ya, ọ bụghị ọrụ m kama ọ bụ nke ndị ọzọ, na ọ bụrụ na ị tinye nwoke na estrogen, ụbụrụ ụbụrụ na-adalata ugboro iri karịa ngwa ngwa karịa ịka nká. Ọ bụrụ na ị tinye ụbụrụ nwanyị na testosterone ụda olu na ụbụrụ na-abawanye. Mana nke ahụ anaghị aghọ amamịghe karịa karịa mkpụrụ ndụ akwara. N'ụzọ ụfọdụ, nke a bụ hypertrophic, na-amụbawanye ọrịa. Ihe ndị ahụ bụ ọmụmụ emere site na ọmụmụ MRI na isi. E meela nke ahụ na cell ebe a na sel na ụlọ nyocha site na oke.
Mana enwere nnukwu ego anyị amaghị. Mana ihe anyị maara bụ na ọ bụrụ na ịnweghị estrogen zuru oke n’ime sel, yabụ dendrites anaghị etolite nke ọma. Anyị maara na ụbụrụ nwoke na estrogen, ụbụrụ na-ebelata site na mkpụrụ ndụ na-anwụ anwụ. Anyị maara nke ahụ ma anyị makwaara na GnRH nwere ihe ọ bụla metụtara otu esi ejikwa ya.
Enwere nnukwu ego amaghị. M na-achịkọta ụfọdụ nyocha emere na silos nke ụlọ akwụkwọ na enwere akụkọ achọrọ ịchụso. Akụkọ a na-egosi n'ezie na GnRH na-emetụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-egbochi ya, ndị na-egbochi ya, na-egbochi azụmaahịa mmekọahụ dị n'etiti, na-akwụsị mmetụta nke ule na ovaries na messes na sistemụ limbic, nke na-etinye ya niile ọnụ. Anyị maara nke ahụ. Anyị maara na homonụ nwoke na nwanyị na-enwe mmebi nke ụbụrụ nwoke na hypertrophy nke ụbụrụ nwanyị. Anyị na-eche etu nke ahụ ga-esi mee. Anyị hụrụ na nyocha ahụ dịpụrụ adịpụ na-egosi, na-elele mkpụrụ ndụ ndị na-eto na efere petri, na enwere mmetụta a.
Enwere ihe ọzọ? Ama m na o siri ike nghọta. Enwere ihe ọzọ? Achọpụtara na ndị nwoke e nyere ndị na-egbochi ya, ndị nwoke nwere ọrịa prostate, nyere ndị na-egbochi ya iji belata nzuzo nke testosterone bụ nke amaara na ọ na-arịa ọrịa prostate, ha na-arụ ọrụ ndị isi belatara. Mụ nwanyị e nyere ya maka endometriosis na ihe ndị ọzọ egosila na akụkụ ụbụrụ anaghị arụ ọrụ yana na enwere nnyonye anya na nke a. Onweghi onye matara ka nke a si arụ ọrụ, na m na-ekwu na nke a abụghị nyocha m, nke a bụ nyocha emere ebe a, ebe a, ebe a, na ọ na-arụ akụkọ na ihe ndị a anaghị eme isi gị. Ma ndị na-akwado usoro ọgwụgwọ na-ekwu na ha nwere nchekwa na ngbanwe kpamkpam.
Ihe ikpeazu bu nke a. Womenmụ nwanyị ndị ahụ e nyere ndị na-egbochi maka endometriosis, nke bụ ọrịa na-enweghị nchịkwa na akụkụ nke mgbidi akpanwa, ọ na-egosi na etrogen na-akpali ya, ya mere ha na-enye ndị na-egbochi ndị na-abịa ebe a. Enweghị gonadotropins, ya mere, ovary na-agbachi ma emepụtaghị ya. Ha chọpụtara na enwere mmụba na-enweghị atụ na ọnụ ọgụgụ mgbaàmà nke eriri afọ na ndị a. Ma ọ dị mfe itinye obere okpu biopsy, nke ha mere ma ha hụrụ, "Oh, dogide na nke abụọ, gịnị mere ebe a?" Enwere mbelata pacenti iri ise dị na eriri afọ nke mere ka eriri afọ mechie.
Ya mere, olee ebe ihe a niile na-aga? Ihe anyị na-eche, akụkọ a bụ na GnRH abụghị naanị ihe dị mkpa maka akụkụ ụbụrụ a nke mmekọahụ, mana ọ dị ka ọ dị mkpa maka nlekọta ahụike na iguzosi ike n'ezi ihe yabụ ọrụ nke akwara n'ozuzu. Nke a abụghị ọrụ m, mana ọ bụghị m na-ekwu na ha nwere nchekwa ma ọ bụghị m na-eleghara Protocol Nuremberg anya nke na-ekwu, Ọfọn, ịkwesighi ime ihe nwere akara ịdọ aka ná ntị na anụmanụ. Ihe m na-ekwu bụ iji mmesi obi ike a mee ihe a bụ nnwale na-enweghị ntọala sayensị. Naanị iji gosipụta otu esi egbochi ya site n'aka ndị na-egbochi mmiri ọgwụ ahụ na hormone na-enwe mmekọahụ.
Mkparịta ụka a bụ na e kwesịrị inye ndị na-egbochi ya ka nwatakịrị ahụ nwee ike ịghọta njirimara ya nke ọma, mana anyị ekwuola na ndị na-egbochi ya nwere nnukwu mmetụta ọ ga-egbochikwa mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya na usoro mkpụrụ ndụ nke ọzọ na nke testosterone na nke testosterone. Ihe ndị a niile na-agbakọta iji mee ka nwa ahụ rụpụta ọrụ ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị, yana ma ọ chọrọ ịmụ ụmụ ma ọ bụ na ọ chọghị. Ọ bụ ihe na-agwụ ike ịrụ ụka, n'echiche nke m, na ị nwere ike ịhapụ nwatakịrị ma mee ka nwatakịrị a ghara ịhapụ ya mgbe ahụ, ma tụọ anya ka ha ghọta ihe ịhụnanya ịhụnanya na inwe ezinụlọ dị.
Ugbu a ebumpụta ụwa na nke ahụ, ọ bụrụ na ị nọ na homonụ nwoke na nwanyị maka oge ụfọdụ, ọ bụrụkwa na ị nwere ọrụ ahụ, a ga-atụ gị. Ọ dịghị onye nwere mmasị na okwu "C", okwu nkedo. Ha na-ekwukarị gbasara mbido ọmụmụ, okwu ọzọ na ihe niile ma ha na-ekwu, "Ọfọn, ị gaghị enwe ike ịmụ ụmụ ma ọ bụrụ na ịchọọ nke a, agbanyeghị, anyị nwere azịza maka gị." Gịnị bụ azịza ya? Ọ bụ na anyị ga-ewere biopsy nke ule gị ma ọ bụ ovary gị, anyị ga-edebe ya n'okpuru nchekwa oyi maka afọ X. Ma lee, ihe niile ga-adị mma maka na anyị ga-eme ka ọ dị ọkụ ma kwekọọ na onye ọzọ ma n'ụzọ ụfọdụ ma ọ bụ na ị ga-enwe ike ịmụ ụmụ. Onye ọ bụla nwere echiche ọ bụla banyere mgbagwoju anya nke fatịlaịza fatịlaịza ga-amara na nke a bụ azụmaahịa a na-echeghị nke ọma. Mana nke ahu bu mmesi obi ike enyere ndi mmadu. Echegbula onwe gị, ị nwere ike ime mkpebi gị, ị ga-enwe ike ịmụ ụmụ ma emechaa.
Anyị kwukwara na enwere mmetụta sitere na homonụ nwoke na nwanyị na otu nwoke si eme ka ụbụrụ nke ụbụrụ belata yana otu nwanyị si eme ka olu ya mụbaa. Ma nke a abụghị mmụba nke mkpụrụ ndụ akwara ma ọ bụ ihe ọ bụla, nke a bụ ihe a na-adịghị ahụkebe, nke a bụ mmụba na-enweghị nchịkwa. Yabụ, n'ime ịgba akaebe na Courtlọikpe Ezinaụlọ nke Australia enwere mantra a ugboro ugboro na ndị na-egbochi ihe nchekwa dị mma ma gbanwee kpamkpam, mgbe ahụ ha na-ekwu maka, "Ọ dị mma, enwere nsogbu site na homonụ nwoke na nwanyị." ma ọ dịghị onye nwere mgbe ọ bụla, m gụkwara ha niile, kwuru eziokwu na ọ ga-adalata ma ọ bụ gbanwee ụbụrụ gị. Onweghi onye kwuru nke a ma ọ bụ nsogbu uche. Ha na-ekwu na ị nwere ike ịda mba karịa. May nwere ike ịnwe ọtụtụ ihe, mana ọ nweghị onye na-ele mmetụta anụ ahụ na ụbụrụ anya.
Ha na-ekwu, ha na-akọwa, ọnụọgụ dị elu nke igbu onwe onye n'etiti ndị toro eto, nke dị okpukpu iri abụọ na iri atọ karịa ndị ọzọ, na nke a bụ n'ihi na ọha mmadụ anaghị anabata ha. Mana dịka anyị kwuru, nke a bụ na Holland na Belgium ebe nnabata ihe ndị a dị oke mma. Okwu bụ, enwere ike inwe nkọwa ọzọ na ya? Ha niile na-egbu onwe ha. O doro anya na obi adịghị ha mma. Kedu ihe ọ bụ? Onwebeghi onye juworo, “Ọfụma, dabere na nkeji nke abụọ, ị ga - echilata ụbụrụ nwoke a n’ okpukpu iri karịa ịka nka. I mewo ka akwara ozi ghara ịnwụ. ” Apoptosis bụ okwu pụrụ iche. “I mewo ka ọtụtụ mkpụrụ ndụ akwara nke dị n'ụbụrụ nke onye a nwụọ, ọ̀ bụ na ị gaghị enwe ike igbochi echiche ya na mmetụta ya n'ụzọ ụfọdụ ma ọ bụ nke ọzọ? Nke a ọ́ gaghị abụ mmetụta ọgwụgwọ ya na-akpata? ” Onweghi onye juru ajuju a doro anya.
Kedu ihe ọzọ ọ ga-abụ? Anyi maara na mgbe anyị na-ele anya na mkparịta ụka mbụ na ebe a na imirikiti ụmụaka na-abanye na nke a na-echegbu onwe ha tupu ha amalite. Ọ bụ naanị na ọ ga-eme ka ihe a mee ka ihe ghara ịga n’ihu? A gbara ha ume n'oge mbido ndụ ha, mana ugbu a, n'oge owu na-ama, oge oyi, nke afọ dịpụrụ adịpụ nke okenye, “Jụrụ na nke abụọ, enweghị m a happyụrị dịka m chere na ọ gaara abụ.” Nke a ọ bụ ihe kpatara ọnụọgụ igbu onwe onye? Ma ọ bụ ihe ọ bụ bụ, “Ikwere na nke abụọ? Agara m na nsogbu a niile, ma enweghị m obi ụtọ karịa ugbu a lee ihe m meere onwe m. ”
Enweghị nloghachi. Ọ dị irè. Ọ bụghị Transphobic. N'ezie, ị nwere ike ịsị na ọ na-agbanwe agbanwe. Ọ bụ ọmịiko maka ndị nwere nsogbu a ka a ga-ajụ ajụjụ ndị a. Adịghị m transphobic. Echere m na nke a bụ oke nhụjuanya nke ụmụ mmadụ na anyị kwesịrị ịjụ ajụjụ niile, ọ bụghị naanị ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ziri ezi mgbe anyị na-anwa ịtụle ya na inyere ndị mmadụ aka.
Vidio 8 - Hormones-nwoke na nwanyị - Pịa> Iji budata PDF ebe a.